Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-elekọta bọl Nwa Jose Mourinho bụ nwata nke akụkọ akụkọ na-enweghị isi
LB na-egosi Full Story of a Football Manager onye kacha mara aha na aha njirimara; ''Onye Pụrụ Iche'. Josemụaka Jose Mourinho Akụkọ ya na akụkọ na-enweghị isi akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Legendary Football Manager na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Obi abụọ adịghị ya, ọtụtụ ndị na-ele Jose Mourinho anya dịka onye njikwa bọọlụ na-aga nke ọma na nke a na-akpọ asị na ụwa.
Akụkọ Jose Mourinho nke nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
José Mário dos Santos Félix Mourinho mụrụ na Setúbal, Portugal na Jenụwarị 26th, 1963 ka ọ mụta Mr José Félix Mourinho, onye bụ Onye Nlekọta Ọkachamara na nne Maria Júlia Carrajola dos Santos, onye bụ onye nkuzi ụlọ akwụkwọ praịmarị.
A zụlitere Jose na ezinụlọ bara ọgaranya. E weere nne ya, Maria Júlia Carrajola dos Santos, dị ka onye na-egbo mkpa ezinụlọ.
Ọbịbịa ya si n'ezinụlọ nwere ọgaranya na-ahụ n'anya football na-atụ ụzọ maka ezigbo nzụlite Jose na nna ya na-eji nwayọ agagharị n'ihe a na-akpọ 'ọmarịcha ọrụ nchekwa'. Dika nwatakiri, o nwere ohere inweta ohere nwata obula choro iche.
José Mourinho - Biography nke Nne na Nna na Nhọrọ nke Ọrụ:
Site na nwata, bọọlụ bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ Mourinho. Gị, e nwere echiche dịgasị iche banyere ihe nne na nna ya chọrọ karịsịa nne ya chọrọ maka ya.
Nne ya bara ọgaranya (Maria Júlia Carrajola dos Santos) bu n'uche na nwa ya nwoke kwesịrị ilekwasị anya na agụmakwụkwọ iji bụrụ onye ọchụnta ego na-aga nke ọma dị ka nna ya Mr dos Santos Snr.
Nna Jose bụ onye na-eche nche nwere echiche dị iche iche. Ọ chọrọ nwa ya ka ọ bụrụ ọkachamara n'ịgba ọsọ. Gaghị etinye oge dị ukwuu na Jose n'ihi ntinye aka na nchekwa na isi obodo 'Porto' na Lisbon.
Site na itinye ya, Nkwado bọọlụ na Porto na Lisbon pụtara na Félix Mourinho na-ekewapụkarị nwa ya nwoke. Gị onwe gị, enweghị nna nke Jose anaghị egbu nrọ ya.
Otú ọ dị, nkewa a nyere mama ya Maria Júlia Carrajola dos Santos ohere ikpebi ọdịnihu nwa ya. ya mere Jose na-ata ahụhụ site na ndụ ọchịchị aka ike ya.
Nne ya debara aha ya n'ụlọ akwụkwọ azụmahịa, mana Jose Mourinho kwụsịrị n'ụbọchị mbụ ya, guzoro ala ya wee kpebie na ọ ga-elekwasị anya na egwuregwu.
Ọ họọrọ ịga Instituto Superior de Educação Física (ISEF), Mahadum Teknụzụ nke Lisbon, iji mụọ sayensị sayensị. Ihe Jose na-elekwasị anya na sayensị egwuregwu tọrọ ntọala nke taa ọ bụ.
Jose Mourinho Bio - Followinggbaso nzọụkwụ nke nna ya:
Mourinho ọbụna mgbe ọ na-aga ọmụmụ ihe nwa oge gara ịga egwuregwu nna ya na ngwụsị izu.
Mgbe nna ya ghọrọ onye nchịkwa, Mourinho malitere ileba anya ọzụzụ wee mụta otu esi achọpụta ndị na-emegide ya. Jose Mourinho na-achọ mgbe nile ịgbaso nzọụkwụ nna ya.
Nna ya na nso nso a Pollemma dee nwere ihe a iji kwuo;
“Mgbe ọ bụ 13 ma ọ bụ 14 m ghọrọ onye njikwa na m ga-eme njem. José ga-achọta mgbe niile ụzọ ọ ga-esi tụgharịa ebe ọ bụla m nọ.
Site na nchịkwa ma ọ bụ ọbụna ụgbọ njem ụgbọ mmiri, ọ ga-anọnyere m mgbe niile maka egwuregwu izu ụka. Ọ malitere ijikwa ụmụ nwoke bọọlụ.
Ọ ga-edo onwe ya n’azụ oche anyị. M ga-enye ya ntụziaka nke ọ ga-enyefe ndị egwuregwu ahụ, na-agbaga n'akụkụ nke ọzọ nke pitch ịgwa ha. So ọ malitere n'isi ụtụtụ iji mesoo usoro na usoro egwu…
Nwa okorobịa Jose Mourinho na nna ya.
Mgbe ọ bụ 15 ma ọ bụ 16 ọ gwara m na ya chọrọ ịbụ onye njikwa. Ọ malitere ilele ìgwè ndị anyị ga-egwu ma kwadebe akụkọ, nke ahụ nyekwaara m aka nke ukwuu.
Echetara m mgbe m bụ onye njikwa na Uniao de Madeira na anyị gara igwu egwu na Amadora.
Ọ dịkarịa ala, eserese ka anyị chọrọ iji nweta akara egwuregwu maka otu akụkụ nke oke Njikọ Portuguese. ”
Jose sonyeere CF Os Belenenses otu mgbe gụsịrị akwụkwọ na ọmụmụ. N'oge ahụ, nna ya na-egwu bọọlụ ọkachamara maka Os Belenenses na Vitória de Setúbal, na-enweta otu okpu maka Portugal n'oge ọrụ ya.
Mourinho malitere ịgbaso nzọụkwụ nna ya site na itinye aka na football.
He bụ onye ọkpụkpọ na ọ bụghị onye nchebe. Ọ na-egwuri egwu na Portuguese nke abụọ. O di nwute, itinye aka ya na football ndi okacha amara juputara na ule na nsogbu.
Jose Mourinho dị ka ndị ịgba egwu bọọlụ - Njikọ aka na egwuregwu bọọlụ.
José Mourinho mere ka ọ bụrụ onye mbụ na-ahụ maka Rio Rio na 1980. N'ebe a, Mourinho na-akpọ dị ka Central Midfielder ma mee ka ngosi 16 dị n'otu - na-atụle ihe mgbaru ọsọ abụọ.
Na 21 afọ, Mourinho kwagara Sesimbra, ebe o mere 35 otu egwuregwu wee hụ otu ihe mgbaru ọsọ. Mourinho ọzọ dị mkpirikpi dị na Comércio e Indústria, bụ ebe o mere ka ọhụụ 27 wee hụ ihe mgbaru ọsọ 8.
Jose Mourinho Biography Eziokwu - Na-agbasi mbọ ike ibi ndụ nna ya:
Jose Mourinho itinye aka na football football dị mkpụmkpụ. Ọ nwere ezumike nká n'oge mgbe a katọrọ ya ugboro ugboro n'ihi enweghị ike na ike na egwuregwu ahụ.
Kama ịnọgide na-enwe ihe mgbu, ọ họọrọ ilekwasị anya n'ịghọ onye nchịkwa football. Oge ezumike nká ya n'oge gara aga gosipụtara njedebe nke mgba iji bie ndụ nna ya nke igwu egwu na ọkwa mba.
Gbanwe n'etiti Ọrụ Nkuzi na Transsụgharị:
Jose Mourinho malitere ọrụ ịkụziri ya ọzụzụ site n'ịkụzi agụmakwụkwọ anụ ahụ dị iche iche ụlọ akwụkwọ na mgbe afọ ise gasịrị, ọ nweta akara diplọma ya, na-enweta akara ngosi dị mma n'oge niile.
Mourinho mbụ gosipụtara talent ya na-enye ọzụzụ na obere oge nchịkwa na-aga nke ọma na Benfica na União de Leiria, na-ewere nke a na njedebe kachasị elu.
Mgbe obere oge ahụ gasịrị, ọ gara n'ihu ịzụ ọzụzụ site na ịga ọzụzụ ọzọ ọmụmụ nke Bekee na Scottish Football Associations nwere. Ọrụ ya jidere anya anya nke onye bụbu onye Scotland, Andy Roxburgh. Ọ rịbaara ụgbọala ndị na-eto eto Portuguese anya na nlebara anya na nkọwa.
Mgbe e mesịrị, Jose Mourinho chọrọ ịkọwapụta ọrụ nke njikwa na football site na ịgwakọta echiche nkuzi na usoro mkpali na nke uche nke ntụgharị asụsụ.
Mgbe nkwuputa okwu na-arụ ọrụ dị ka onye nchịkwa aka na onye nchịkwa otu ndị ntorobịa, Na 1992 Jose Mourinho hụrụ onwe ya ijikọ ọrụ site na ịghọ onye ntụgharị okwu maka Sir Bobby Robson na Sporting Club Portugal.
Mgbe Robson gara Barcelona na 1996, Mourinho sochiri - ịmụ asụsụ Catalan na ịghọ akụkụ dị mkpa nke ntọala ahụ.
Jose Mourinho onye ntụgharị.
Ọ na-eso Bobby Robson ka FC Porto na Dec 1993. Ha abụọ mepụtara mmekọrịta dị mma na Jose Mourinho na-amụta site na Bobby Robson na Robson na-atụkwasịkwu obi na echiche nke ndị na-eto eto bụ Mourinho.
E nyekwara Mourinho ọrụ maka ijikwa ndị otu Barcelona B, na Barcelona A maka ụfọdụ asọmpi iko.
Dị ka onye nchịkwa njikwa, Jose kụziri ụfọdụ n'ime ndị kachasị mma n'ụwa dịka Rivaldo, Figo na Guardiola na Luis Enrique.
Ihe akaebe na Jose Mourinho zụrụ Ronaldo Luís Nazário de Lima.
Ọ na-adọrọ mmasị ịmara na Jose Mourinho zụrụ Pep Guardiola. Ọ ka bụ onye nchịkwa ndị nchịkwa mgbe Pep Guardiola ka na-egwu egwu na Barcelona.
Jose Mourinho zụrụ Pep Guardiola na Barcelona.
Mgbe Robson hapụrụ ụlọ ọrụ ahụ, Mourinho nọrọ na ya, na-arụ ọrụ Dutch, Louis van Gaal na afọ abụọ gara aga maka Barcelona.
Jose Mourinho na Louis van Gaal na Barcelona.
Akụkọ Jose Mourinho nke na - abụghị eziokwu - Oge nkuzi mmalite:
Jose Mourinho laghachiri na Porto na mbido 2002 dị ka onye nchịkwa isi, na-emeri Primeira Liga, Taça de Portugal, na UEFA Cup na 2003.
N'oge na-esote oge, Mourinho duru ndị otu ahụ mmeri na Supertaça Cândido de Oliveira, ruo n'isi nke njikọ nke ugboro abụọ, wee nweta ugwu kachasị elu na European football football, UEFA Champions League.
Mourinho si UEFA Champions League Glorydays na FC Porto.
Mourinho gara Chelsea na afọ sochirinụ ma merie ya na Njikọ Premier League na ihe ndekọ 95, nchịkọta nke mbụ nke ọgbakọ ahụ na 50 afọ, na Njikọ Njikọ n'oge mbụ ya.
Oge Jose Mourinho Oge Ebube Oge na Chelsea FC.
N'afọ nke abụọ ya, Chelsea kwadoro Premier League na 2006-07 o weere ọgbakọ ahụ na Cup Cup na Njikọ Njikọ okpukpu abụọ.
Mourinho hapụrụ Chelsea na Septemba 2007, n'etiti akụkọ banyere esemokwu ya na onye nwe ụlọ Roman Abramovich. Na 2008, Mourinho kwagara na Inter Milan na Serie A.
N'ime ọnwa atọ o meriri nsọpụrụ mbụ nke Italiantali, Supercoppa Italiana, wee mechaa oge site na mmeri isiokwu Serie A.
Na 2009–10, Inter ghọrọ ọgbakọ izizi totali iji merie okpukpu atọ nke Serie A, Coppa Italia na UEFA Champions League, bụkwa oge mbụ Inter meriri na asọmpi ikpeazụ ahụ kemgbe 1965.
Ọ bụ otu n'ime ndị nchịkwa ise ka ha merie European Cup na ndị otu abụọ dị iche iche, tinyere Ernst Happel, Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes na Carlo Ancelotti. O meriri nke mbu FIFA World Coach of the Year Award na 2010.
Jose wee banye na Real Madrid na 2010, na-emeri Copa del Rey n'oge mbụ ya. N'afọ sochirinụ, ọ meriri La Liga wee bụrụ onye nchịkwa nke ise, mgbe Tomislav Ivić, Ernst Happel, Giovanni Trapattoni na Eric Gerets, meriri ndị isi na mba anọ dị iche iche: Portugal, England, Italy na Spain.
Mgbe mourinho hapụrụ Madrid na June 2013, Mourinho laghachiri England iji jikwaa mpi nke abụọ, ha meriri mmeri ọzọ, ma a kpochapụrụ ya na 17 December 2015, mgbe ọ na-emeghị ihe ga-esi na Chelsea pụta n'èzí n'èzí ebe a kpọpụtara.
Mgbe ọnwa ole na ole gasịrị mgbe ọ nwụsịrị ọrụ na Chelsea maka oge nke abụọ, a kwadoro Mourinho dịka onye njikwa ọhụrụ nke Manchester United na 27 May 2016.
Ndụ Jose Mourinho Ezinụlọ:
Jose Mourinho lụrụ di na nwunye kemgbe 1989. Ọ lụrụ enyi ya nwanyị nke Angolan dị afọ iri na ụma Matilde "Tami" Faria. Ha malitere ịlụ mgbe ha dị afọ iri na ụma na Setúbal, Portugal. Ndị mụrụ ya mụrụ ya na Angola mgbe ha na-arụ ọrụ dị ka ndị ọrụ enyemaka na-enyere ndị mmadụ aka na mba ahụ.
Josaị ga-aga n'ihi ya n'ihi nzụlite dị umeala n'obi ya. A maara Matilde na ọ na-akwanyere mmadụ ùgwù, na-edo onwe ya n'okpuru, na-emetụ onwe ya aka ma dị umeala n'obi. Ọ na-etinye ọtụtụ n'ime oge ya na-akwụ ụgwọ ala ndi mmadu ọrụ Africa.
Ọ bụ ihe kpatara ịhụnanya Jose Mourinho maka ndị na-agba ọsọ n'Africa na ọrụ ebere ọ na-akwado maka ndị Africa.
A mụrụ nwa mbụ ha, nwa nwanyị Matilde na 1996 ma ha nwere nwa ha nwoke mbụ, José Mário, Jr. (onye na-egwu bọl maka otu ndị ntorobịa Fulham FC), afọ anọ ka e mesịrị.
Mourinho, ebe ọ raara onwe ya nye football, na-akọwa ezinụlọ ya dị ka etiti nke ndụ ya ma kwuo na "ihe kachasị mkpa bụ ezinụlọ m na ịbụ ezigbo nna."
A hoputara ya ka onye New Statesman Man of the Year 2005 ma kowa ya dika nwoke rapuru ulo ya na oru ya.
Na njedebe nke 2011, a kpọrọ Jose Mourinho 'Rockstar of the Year' site na mbipụta nke Rolling Stone nke Spanish ma gosipụta ya n'ihu ihu nke mbipụta December ha.
Jose Mourinho gbasara ebubo ebubo:
E boro Jose Mourinho ebubo na ya na nne ya nwanyị mara mma, Elsa Sousa bi n'azụ nwunye ya ruo afọ abụọ.
Ebubo ebubo nzuzo nke Mourinho.
Dabere na akụkọ sgforum, Mourinho, zutere Elsa na-acha odo odo mgbe ọ na-azụ ndị otu obere obodo Leiria na obodo ya bụ Portugal. Ọ kpọgara ya na FC Porto, bụ nnukwu ọrụ mbụ ya ebe ndị ahụ biri ruo ọnwa asatọ na ụlọ ezumike nke ụlọ ahụ doziri.
Mourinho gosipụtara ya dị ka nwunye ya na ndị ọrụ FC Porto na ndị nnọchi anya ya. Mgbe ọ na-eme nke ahụ, ezigbo nwunye ya bụ Matilde nọrọ n'obodo ha bụ Setabul na nwa ha nwanyị, akpọkwa Matilde na nwa nwoke Jose Junior.
E boro onye isi na Bad Blues ebubo inye ya onyinye ma gwa ya na ọ bụ ya bụ ezigbo ịhụnanya. Echiche ọ bụ nwunye Jose bụ nwunye bịara na njedebe na mberede mgbe ezigbo Oriakụ Mourinho tụgharịrị. Nwunye ya bụ Matilde, onye ọ lụrụ na 1989, amaghị na ọ na-ebi ndụ ihu abụọ.
Jose Mourinho Arụmụka Akwụkwọ:
Mourinho nwere ike imeri mmeri n'èzí na football na 2004. Otu akwụkwọ aha ya bụ Jose Mourinho - Mere na Portugal:
Akwụkwọ esemokwu nke Jose Mourinho.
The Official biography site n'aka onye nta akụkọ Portuguese bụ Louis Lourenco, bụ onye na-ere ahịa kacha mma na mba ahụ, n'agbanyeghị mgbalị ndị njikwa Portuguese na-eme iji gbochie ya ibipụta na mbụ.
Akwụkwọ ahụ gosipụtara ezinụlọ Mourinho na ụjọ ha na-atụ ya. Akwụkwọ ahụ toro nka nka ntụgharị ya nke gosipụtara ike ya ịsụ Portuguese, Bekee, Spanish, Catalan, Italian na French.
Gị, ọ na-etipụkwa ndị mmadụ ka na-akpọ ya onye nsụgharị nke nwere ọrụ nchịkwa.
Akụkọ Jose Mourinho - Biography nke Ndị mmadụ:
Onye isi Chelsea Jose Mourinho rịọrọ FA ka ọ nye onyinye maka ọrụ ebere ọ bụla ọ ga-akwụ ụgwọ maka mmejọ n'ọdịnihu. Ọrụ ebere n'ebe a pụtara inyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka n'Africa.
Jose Mourinho, Onye Na-enye Onyinye Afọ Onyinye.
Kama ịga na-ele ihe nkiri 2014 World Cup na Brazil n'oge okpomọkụ a, Mourinho jiri oge na-eleta ụmụaka na-agụ agụụ na ndị HIV na Ivory Coast. E nyere ya ọrụ nke ndị nnọchiteanya mba United Nations maka usoro nri ụwa.
Ọrụ enyemaka Jose Mourinho maka Africa
Na 2005, Mourinho nyere jaket ka ọ bụrụ onye na-ere ahịa ya iji nyere aka bulie ego maka Enyemaka Tsunami na ọrụ ebere ndị ọzọ.
Onye nhazi Marc Thompson kpughere na otu onye bidoro kwụrụ € 25,800 maka uwe Mourinho na nchịkọta ego emere na Stamford Bridge. Mkpokọta jaket 'ọchị' nke Mourinho keere òkè n'ịwelite £ 545,000 maka ihe kpatara ya.
Nwunye Mourinho bụ ezigbo onye na-elekọta mmadụ ma tụgharịa gafee ụwa iji nyere ndị dara ogbenye nọ n'obodo ya aka iwepụ agụụ. José Mourinho, nwunye ya na ụmụ ya gara Ivory Coast iji hụ ọkwa ịda ogbenye n'ebe ahụ.
Jose Mourinho Nkịta njide:
Na 2007, e nyere Mourinho nlezianya ndị uweojii mgbe ekwesịrị ịjụ ịjụ ikwe ka ndị uwe ojii chebe nkịta ya, Leya.
N'ịbụ onye gbara ọsọ site na onyinye onyinye na-esote na nwunye ya natara ya, onye nchịkwa Chelsea ahụ hapụrụ anụmanụ ahụ n'aka ndị ọrụ ahụike wee gbaa ya ume ka ọ gbadaa n'okporo ámá, dị ka ndị ji anya ha hụ.
Ihe kpatara e jidere Nkịta Jose Mourinho (Leya).
Aghọtara na onye ọrụ gọọmenti chọrọ ka ndị nkịta chebe ya, kwere na e weghaara ya na mba ọzọ ma weghachiri ya na Britain n'enweghị ọgwụ mgbochi.
Mourinho natara ịdọ aka ná ntị maka igbochi ndị ọchịchị site n'ịrụ ọrụ ha. Ndị uwe ojii jidere obere anụ nkịta ya, Leya ozugbo.
Iwe Chelsea na-agba iwe na ụbọchị nke ọzọ ha mere site n'itinye ọkọlọtọ na-egosipụta 'Nkịta Jose bụ Innocent'. Ha alaghị azụ n'achọ ka a hapụ nkịta ahụ ozugbo.
Iwe Fans Chelsea na-achọ ka a hapụ Leya.
Ntugide ha nọgidere na-eme ka ndị ọchịchị gbanwee uche ha na ịtọhapụ Leya ogbenye.
Okpukpe Jose Mourinho:
Nkwenkwe Okpukpe nke Jose Mourinho.
Mourinho bụ onye Katọlik dị obi umeala n'okwukwe. A zụlitere ya (dị ka ọ bụ omenala Portuguese) ọ na-ekwukwa na ọganihu ya na football na Chineke na okwukwe ya:
'M na-ekpe ekpere ọtụtụ. Abụ m Katọlik, ekwere m na Chineke. Ana m agbalị ịbụ ezigbo mmadụ ka O wee nwee obere oge iji nye m aka mgbe m chọrọ ya '.
Mourinho na-abụkarị okwu esemokwu na (ikekwe ụgha). A kọrọ na mgbe ọ na-ewere ọnọdụ na Real Madrid, ọ rịọrọ ndụmọdụ na ngọzi nke ụfọdụ ndị dọkịta Kenyan, bụ ndị ndị nnọchiteanya ya zara, sị:
'José Mourinho bụ onye Katọlik nke ukwuu ma kwere na Chineke.
N'okwu metụtara ọrụ ọkachamara ya, ọ kwenyere n'ịrụsi ọrụ ike ọ bụghị na ọrụ ebube nke onye mgbaasị ochie ọ bụla '.
Agbanyeghị, ụfọdụ nwere ike ekwenyeghị na Mourinho niile kwenyere na ọ bụ ọrụ siri ike. A na-akpọkarị ya dị ka onye na-achịkwa ndị egwuregwu na otu ya. Onye nwere onwe ya Portuguese agbanyela aka ya na ihe nkiri ebe ọ ga-akpọ Pope.
José Mourinho ka ọ rụọ ọrụ dị ka Pope Francis na Movie Animated.
Onye bụbu onye isi Chelsea ekwenyela na nkwekọrịta ibinye olu ya na agwa Pope Francis n'ihe nkiri eserese n'ihi nkwenye na 2017 maka otu narị afọ nke ọhụụ nke Virgin Mary na Fatima, Portugal.
Mourinho ga-abụ olu Argentine pontiff n'asụsụ Portuguese, Bekee, Spanish na Ịtali - "asụsụ nke mba ebe ọ (Mourinho) bụbu onye mmeri," ka ụlọ ọrụ na-emepụta Portuguese Imaginew.
Ojiji Mourinho na ihe nkiri a na-ese onyinyo "enwetala nkwado nke Vatican", kwuru na ụlọ ọrụ mmepụta ahụ.
Ezigbo Ezinụlọ Jose Mourinho - The Stakes:
Jose Mourinho na papa Felix Mourinho- Ezinụlọ bara ọgaranya.
Ezigbo ezinụlọ Jose Mourinho nwere nnukwu ọrụ ma nwee azụmaahịa na egwuregwu bọọlụ ọkachamara na mgbakọ. Ezinụlọ nne ya kwụrụ ụgwọ owuwu egwuregwu bọọlụ Vitória de Setúbal nke taa na obodo ha na Portugal.
Otu Ezinụlọ Jose Mourinho si nyere aka na Stadium Stadium.
Nwanne nna ya bụ onye nyere ego iji wuo egwuregwu bọọlụ Itória De Setubal na mbido 70. Otú ọ dị, achọpụtara na ọdịda nke ọchịchị António de Oliveira Salazar nke Estado Novo n'April 1974 nwere mmetụta dị njọ na azụmaahịa ya n'ihi na ọ tufuru ọtụtụ ego ya n'oge ahụ.
Jose Mourinho Childrenmụaka:
Foto nke Jose Mourinho na nwa m nwanyị, Matilde.
Mourinho na ada ya Matilde bụ ndị kachasị ewu ewu na ezinụlọ ya. A maara ya nke ọma na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na London yana ụfọdụ kpakpando kachasị ukwuu n'ụwa gụnyere otu Direction nke Haran.
Nwa Jose Mourinho nke mere agadi abanyela akwụkwọ na afọ abụọ na Fulham.
Jose Mourinho na nwa, Jose Mario Mourinho Jr..
Ọ bụ onye na-eche nche ma na-egwuri egwu na nku nke ndị ntorobịa nke Chelsea na Real Madrid ebe nna ya zụrụ azụ. Imezu ihe nna ya na - enweghị ike ime maka nna nna ya bụ nrọ ya.
Eziokwu Jose Mourinho Tatoo:
Onye na-asụ Portuguese nwere akpa egbugbu ya n'oge 50, na, ihe ijuanya, ọ dịghị ihe jikọrọ ya na football.
O doro anya na Mourinho kwụrụ £ 80 maka egbu egbu nke na-ede aha nrọ aha ya bụ Matilde Faria na ụmụ ya.
Ọ na-ekwenye na ọganiihu ya n'ịkụzi bọọlụ na nkwado ndị ezinụlọ ya nyere ya. A naghị ahụ egbugbu ahụ anya ọha na eze dị ka ink dị na ogwe aka ọ na-eyikarị elekere.
Ndụ Jose Mourinho:
Ọ dịrị ndụ ndụ ya niile na mpụga ụlọ nke aka ya ma nọrọ na họtel. Ọbụna Jose mere mkpesa banyere ya maka ịhapụ ndị ezinụlọ ya oge niile.
N'oge na-adịbeghị anya, ọ nwetara ụlọ ruru £ 3.9million castle nke dị na mpụga obodo welsh nke Ruthin nke dị naanị elekere elekere si Manchester.
Lọ obibi ahụ dị ka otu narị afọ mana ọ bụ n'ezie otu n'ime ụlọ ndị ọdụdụ na Wales. Ọ nwere nanị underfloor kpo oku na abụọ glazing.
O nwere dragon ugwo nke na-agba oku mgbe ugbo ala na-ebute oku. Ihe onwunwe ahụ dị okpukpu anọ dị ọnụ ala karịa ụlọ Mourinho nke dị na London.
Jose Mourinho nwere ọtụtụ ịnakọta ụgbọ ala ndị Audi, Porsche, Aston, martin na Ferrier rụpụtara.
Akụkọ Jose Mourinho - nke mere na Eva Carneiro:
Emere ihere n'ihu ọha na mbụ bụ dọkịta Chelsea na-akpọ Eva Carneiro na physio club Jon Fearn, na-akpọ ha 'ndị na-enweghị uche' mgbe ha rutere na pitch iji mesoo Eden Hazard merụrụ ahụ
Nke a mere ka onye bụbu dọkịta Chelsea, Eva Carneiro nwee ọmịiko ịhapụ ụlọ klọb ahụ mgbe iwe ọkụ si Mourinho, 53, onye ọ sịrị na ọ kpọrọ ya "nwa nwanyị akwụna" na Portuguese.
Jose Mourinho si fuo na Eva Carneiro.
Mgbe ọ hapụsịrị ụlọ ọrụ ahụ, ọ gbara akwụkwọ na-ekwu na ịkpa oke nwoke na nwanyị na-ekwu megide klọb na Mourinho nke dịka mirror karịrị £ 1.2m. Tupu ezumike nká, a machibidoro Eva iwu site na bench nke mbụ na-arụ ọrụ na Jose Mourinho.
Chelsea FC na Jose Mourinho nwere obi ụtọ idozi ikpe ahụ ma rịọ mgbaghara "enweghị nchekwa na ya na ezinụlọ ya maka nsogbu kpatara".
Ha abụọ kwenyere na nnukwu ego ịkwụ ụgwọ maka dọkịta dọkịta na-emebu tupu ya emee ihe mgbawa megide ha na-aga n'ihu ọha.
Carneiro nyere onwe ya nkwupụta nke onwe ya, na-ekwupụta enyemaka ya n'ịmezi okwu ahụ.
"Ọ bụụrụ m na ndị ezinụlọ m oge siri ezigbo ike ma na-enye nsogbu ma ana m atụ anya ugbu a ịga n'ihu na ndụ m," ọ sịrị.
As DailyMail kọrọ; José Mourinho na njedebe nke ikpe ahụ kwuru na Dr Carneiro raara ụlọ ịgba okpuru ahụ, na-eleghara ntụziaka ya anya site n'ịgwọ Eden Hazard na pitch ma agụụ na-agụsi ya ike n'ihi na ọ na-arọ nrọ na ịnọ n'azụ ya na TV.
Nwunye Jose Mourinho Rafa Benitez:
Rafa Benitez si Nwunye na-egwu egwuregwu oge ọ bụla na di ya ejirila ọrụ ya na-ekpochapụ nsogbu ahụ Jose Mourinho.
E kwuru nke a mgbe a họpụtara di ya Real Madrid. Ọ na-abịa mgbe a hụrụ Benitez ka ọ na-elekọta ndị otu nke atọ nke Mourinho na-achịbu.
Josaị Mourinho, na-enyeghachi nwunye nwunye Rafa Benitez ihe na-agbawa obi mgbe o kwusịrị onye isi Real Madrid mgbe nile 'na-eme ka ozi ya zuo ezuo'.
Onye-isi-isi nke Chelsea see ya sị: “Ọ bụrụ na ọ na-elekọta nri di ya, ọ gaghị enwe ohere ikwu okwu banyere m.”
Na-eme dị ka Onye gbara ọsọ:
E boro Mourinho ka ọ banye n'ụlọ nkwakọba ihe na Chelsea na tebụl na-asa ákwà n'oge nsogbu Europe na Bayern Munich, ka ọ nọ na-arụ ọrụ iwuchi iwu.
Onye na-emegide ya:
Foto nke Jose Mourinho na-eme ememme Steven Garrard.
Emeela ka Steven Gerrard kwadoro mgbaru ọsọ ikpeazụ nke 2005 Carling Cup site n'ịgba ọsọ n'ihu ndị Liverpool na-emegharị 'shush' na mkpịsị aka ya na egbugbere ọnụ ndị a.
Esemokwu dị n'etiti Jose Mourinho na Arsene Wenger so na ndị kachasị atụ anya na Premier League.
Agha dị n'etiti Jose Mourinho na Arsene Wenger.
José Mourinho na-akpọ Arsene Wenger 'ọkachamara na njedebe' na February 2014, ya na onye na-elekọta Arsenal na-ekwu 'ihere' maka Chelsea na Mourinho.
Otu Na-atụfu Nrite:
N'ịbụ onye na-etinye aka n'ọgụ egwuregwu ndị mmeri nke ndị England na-eme egwuregwu ndị omempụ nke England, mgbe onye ọzọ nyekwara ya ọzọ, o nyekwara ndị na-akwado ya aka.
Jose Mourinho- Ọgwụ Na-atụba Otu.
Mourinho kwuru na 'nrite ahụ maka mmadụ nile'.
Muito bom, Traça a vida de Mourinho desde criança. Ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe banyere Jose Mourinho,